Wararka | Radio Himilo
Home / Wararka
radio himilo December 30, 2017
radio himilo December 27, 2017
Muqdisho – Saraakiil boolis ayaa aad ula yaabay markii ay cagaf ku arkeen maqaayad horteeda, marka loo eego booliska UK. Booliska Cumbria Roads ayaa bartooda twitter-ka soo dhigay sawir cagaftan sheegeyna inay xireen ninkii lahaa. Ninka wuxuu soo dhigtay cagaftan maqaayadda ...
radio himilo December 21, 2017
Muqdisho – Xafladda sanadlaha ah ee qalin-jebinta Jaamacadda Muqdisho ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho. Mas’uuliyiinta kala duwan ee Jaamacadda, xubno sare oo ka socday dowladda dhexe, arday, barayaal, waalidiin iyo marti sharaf ayaa ku sugnaa xafladda. Waxaa loo dabaal-degayay ...
radio himilo December 17, 2017
Muqdisho – Qaaradda Afrika waxaa ku nool dad lagu qiyaaso 1.1 bilyan ama 15% tirada dadyowga caalamka. Waxayna ka kooban tahay 54-55 dal. Bulshooyinka ku nool waxay wadaagaan magaca guud ee Afrikaan. Diinta Islaamku waa midda ugu ballaaran oo ay ...
radio himilo December 14, 2017
Muqdisho – Quddus waa mid kamid ah magaalooyinka ugu da’da weyn koonkaan. Waxa ay kulansatay saddexda diimood ee Islaamka, Masiixiyadda iyo Yuhuudda. Qarniyo wada noolaashiyo iyo is-maan-dhaaf loolan ka dhashay ayay soo martay magaaladan marka dib loo raaco sooyaalkeeda. Tiro ...
radio himilo December 12, 2017
radio himilo December 6, 2017